न्याय वा दया गर्न चाहनुहुन्छ? | Apg29
यो कुनै न्याय बचाउँछ कि अनुग्रह छ।
र एक आलोचक परमेश्वरको बारेमा प्रचार गर्न भन्दा उत्सुक भएकाहरूलाई को हो? खैर, जसले एक पटक ठूलो अनुग्रह थियो र येशूले सुरक्षित थिए तिनीहरू छ। अब अनुग्रह अरूलाई आफूलाई लागू लाग््छ मात्र।
त्यहाँ तिनीहरूलाई चाहने मसीहीहरू हुन्। के बाइबल पढाइ हेर्न गाह्रो छैन। तिनीहरूले व्यवस्था ग्रेस पढ्न छन्। तिनीहरूले लालसा कि न्याय छैन, तिनीहरूले धेरै योना जस्तै हुन् र जुनिपर रूख र sulk अन्तर्गत बसे। यो अचम्मको छ, तर त्यहाँ आज धेरै योना मसीहीहरू हुन्। विशेष गरी अहिले जो कोहीले आफ्नो दृष्टिकोण इन्टरनेटमा प्रकट गर्न सक्ने।
त्यसैले येशूको आए
येशूले तिनीहरूलाई मानिसहरूमाथि पठाउन छैन आए। उहाँले सुरक्षित गर्न आए र बचत गर्नुहोस्। के यो त बुझ्न गाह्रो बनाउँछ? र एक आलोचक परमेश्वरको बारेमा प्रचार गर्न भन्दा उत्सुक भएकाहरूलाई को हो? खैर, जसले एक पटक ठूलो अनुग्रह थियो र येशूले सुरक्षित थिए तिनीहरू छ। अब अनुग्रह अरूलाई आफूलाई लागू लाग््छ मात्र। तिनीहरूले आफूलाई प्राप्त कृपा थियो जब व्यवस्था गर्न भन्दा सीधा भयो। आफूलाई, तिनीहरूले व्यवस्था पालन गर्न सकिएन, तर अब यो राख्न अरूलाई सोधेको छ। कुरा यति गलत कसरी जान सक्छ?
येशूले सुरक्षित गर्न, र यो सुरक्षित आए, संसारको न्याय गर्न होइन आए। यो 2,000 वर्ष मा परिवर्तन गरेको छैन। येशूले आज नै छ। भन्दा येशूको अनुग्रह आउँछ। त्यहाँ अझै पनि येशूले स्वीकार गर्न र सुरक्षित हुन बाँकी समय। येशूले अझै पनि मान्य हुँदा थाले अनुग्रहको वर्ष घोषणा गरे। ग्रेस यो योग्य नगरी तपाईं निःशुल्क प्राप्त कुरा हो। आज परमेश्वरको अनुग्रह अवधि लागू हुन्छ। उहाँले परिवर्तन गरेको छैन।
स्वीडेन भन्दा डोम
त्यहाँ "स्वीडेन को न्यायको" भनिने क्लासिक पुस्तक हो। पुस्तक गर्ने स्वीडेन एक अनाम राज्य आक्रमण छ बारे छ भन्ने प्रारम्भिक 1950 मा दर्शन पायो Birger Claesson द्वारा लेखिएको छ। भुइँमा ध्वंस धेरै स्वीडिश शहर। Birger Claeson कारणले भविष्यसूचक सन्देश परमेश्वरलाई यसरी प्रार्थना गरे निःशुल्क चर्च मा चर्च पुनरुद्धार मा एक र धेरै थियो।
किताबको सामग्री, म जाँच नगरिएको छोड्न, तर शीर्षक को मामला मा, म छोटकरीमा टिप्पणी गर्न चाहन्छु। "स्वीडेन को न्यायको", यो साँच्चै बाइबलीय छ? यो प्रश्नको जवाफ हामी मात्र यूहन्ना 3:17 पढ्नुहोस् गर्नु पर्दैन। परमेश्वरले येशूलाई संसारको निन्दा गर्न तर यो सुरक्षित गर्न पठाउन गर्नुभएको स्पष्ट भन्छन्। यसलाई अझ स्पष्ट गर्न स्वीडेन निन्दा गर्न तर यो सुरक्षित गर्न परमेश्वरले येशूलाई पठाउन गर्नुभयो।
र यो अधिक व्यक्तिगत बनाउन: परमेश्वरले येशूलाई तपाईं निन्दा पठाउन थिएन, तर तपाईंले बचत गर्न! मानिसहरूको पापको बारेमा आज लेख्न केही परमेश्वरले यस जीवनमा तिनीहरूलाई न्याय गर्ने, तर येशूले पापी निन्दा गर्न होइन आयो, तर तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्न भन्छन्।
म भविष्यवाणी मेरो ब्लग साइट मा प्रकाशित "स्वीडेन को न्यायको" छन्। तर म जब एक समय को लागि साइट ब्लग मा निर्मित त्यसपछि म यो पुरानो लेख को हजारौं मा शून्य देखि सुरु गर्न खाली। तिनीहरूमध्ये संग "स्वीडेन को न्यायको" थिए।
बस अन्य दिन म कोही एक क्रोधित ई-मेल मिल्यो। पूर्ण ई-मेल पढ्न गाह्रो बनाउँछ जो राजधानी अक्षर, लेखिएको थियो। म भविष्यवाणी हटाइएको र म यसलाई फिर्ता राख्न गर्नुभयो भने, म एक "वास्तविक मसीही" छैन भने थियो किन मेल मुद्रक प्रश्न।
म यसलाई येशूको बिना लेख मुक्तिदाता छैन भनेर तुरुन्तै लाग्यो! म केही लेख संग छैन भने म येशू र यदि मलाई "वास्तविक मसीही" बनाउँछ भन्ने कुरा हो।
त्यसपछि लिएको राम्रो वस्तु किन गइसकेको थियो पत्ता मुद्रक इमेल गर्नुपर्छ। यो लेख नै मा छैन त्यसैले थियो, तर सुरु ब्लग मा। मेल आउनुअघि म विचार थियो यो लेख पुन प्रकाशित, तर अब म यो हुन दिँदै सोचिरहेका छु।
कहिलेकाहीं युद्ध र प्रकोप को आज हाम्रो संसार मिलान। तर यो परमेश्वरको पठाउँछ कि केही छ। युद्ध र प्रकोप भइरहेको तर परमेश्वरले कुनै न्याय छ। तर परमेश्वरले साँच्चै संसारमा पठाउनुभएको छ कि एक, येशूले विश्वास गर्ने सबैलाई सुरक्षित छ। त्यहाँ येशूले वा इन्साफ मा एक अत्यन्तै फरक छ।
युद्ध र प्रकोप
म एक पल्ट देख्यो जो निराश मा कराए र उहाँले एक प्रकोप मा मृत्यु भएको थियो जो आफ्नो काखमा आफ्नो मृत छोरा आयोजित परमेश्वरको दोष एक मानिस बारेमा टिभीमा समाचार:
"परमेश्वर, तपाईं किन मेरो छोरा मबाट लिएका छन्?!"
तर म तुरुन्तै आफ्नो छोरा मारेको थियो जो परमेश्वर थियो कि लाग्यो।
दुई दिन क्रिसमस हव्वाले अघि 2008 मेरो काखमा मेरो पत्नी Marie र साना छोरा योएल मृत्यु भयो। पछि मलाई येशूले Marie र योएल किन मारे छक्क परे जो ई-मेल आए। पाठ्यक्रम, म मेल जवाफ थिएन। तर यदि म त मद्दत र सहयोग गर्न गएका गर्ने येशूले थियो थिएन? येशूले Marie सुरक्षित थियो र त्यो के भयो कुनै कुरा छैन, आफ्नो हातमा सुरक्षित थियो। त्यो येशू ख्रीष्टमार्फत परमेश्वरसित तयार सबै थियो किनभने त्यो, माथि तोड गर्न कुनै पनि समय तयार थियो। त्यसैले, यो हामी येशूको छ र सुरक्षित छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। हामी भोलि लागि कुनै ग्यारेन्टी छ।
येशू न्याय, हामीलाई सुरक्षित गर्न आए।
यो म यो विषय मा लेख्न तेस्रो लेख छ। नाम दुई अन्तिम " परमेश्वरको कुनै सतावट चाहन्छ र" " आफ्नो छोराछोरीलाई भविष्यमा के तपाईं दिनुहुन्छ? " यो अनुग्रह र व्यवस्था गर्न आउँदा केही लागि हानि र भ्रम को एक अर्थमा छ। हामी पनि अधिक हुनु प्रचार अनुग्रहको सुसमाचार खाली येशू ख्रीष्टमा गर्न आवश्यक छ। यो कुनै न्याय बचाउँछ कि अनुग्रह छ।